Zviitiko zvakakosha zvakanyanya zvakasiiwa na2018 kuvhura sosi | Linux Vakapindwa muropa
Zviitiko zvakakosha zvakanyanya zvakasiiwa na2018 kuvhura sosi
Gore rino rakangopera mazuva mashoma apfuura, rakapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo uye ndezvekuti munyika ye openource kufamba kwakawanda kwakaitwa mukati megore ra2018 iyo inogadza nhungamiro nyowani uye pamusoro pezvose yakagadzira shanduko dzakakosha.
Uye hazvisi pasina, asi iyi 2018 Microsoft yaive neshanduko yechiratidzo chayo kuvhura zviwanikwa nenzira yakanyanyisa, nekuti aive mumwe wema greats akaita shanduko zhinji dzakakosha.
1 Iko kufamba kukuru muna 2018
1.1 Kuvhura kune tekinoroji
1.2 Matambudziko makuru akagadzirwa muna 2018
Iko kufamba kukuru muna 2018
Yeupi we Chinonyanya kukosha chaive kuwanikwa kwegore, sezvo Microsoft yakatenga GitHub ye $ 7,5 bhiriyoni.
Imwe shanduko yakakosha yaive lsarudzo yekuendesa iyo browser yeEdge kune injini yeChromium. Zvakare nekuvhurwa kweWPF, Windows Mafomu uye WinUI kodhi.
Kuburitswa kwa Mu, chikuva chakavhurika cheUFI firmware. Kuvhurwa kwekodhi yemutambo Minecraft: Java Edition.
Kugadzirwa kweAzure Sphere IoT chikuva chakavakirwa paLinux kernel, kushambadzira kodhi yekugadzirisa kugoverwa kweLinux kumhanya paWSL.
Uye kupfuura zvese, chakashamisa vazhinji ndechekuti Microsoft yakabatana nechirongwa chekudzivirira Linux kubva kuzvibodzwa zvepa patent ndokupinda muLOT Network, iyo inodzivirira maratidziro epatent.
Kune rimwe divi, kutaura nezvevakuru ini ndinosimbisawo zvakanyanya izvo IBM ichatenga Red Hat ye $ 34 bhiriyoni uye EQT ichatenga SUSE ye $ 2,5 bhiriyoni.
Nharaunda yeHandshake nePineapple Foundation yakapa rubatsiro rwakakura mukusimudzira mapurojekiti emahara, kusanganisira $ 2 mamirioni akagamuchirwa neCIT Foundation, $ 500 zviuru KDE, $ 400 zviuru GNOME, $ 1 miriyoni - Electronic Frontier Foundation, $ 1 miriyoni - Apache Software Foundation, $ 50 zviuru OpenBSD Foundation, uye t.
Zvakare nekutangazve kwenyaya yedare inoenderana nemutengo weVMware wekutyora rezinesi reGPL uye masenenzi emari emari kubva kumakambani anoshandisa Linux kernel.
Kuvhura kune tekinoroji
Pamakambani akaita mafambiro ekuvhura mapurojekiti kana tekinoroji kune veruzhinji, tinogona kurangarirar Intel yakavhurwa nyowani kuvandudza mumuchina kudzidza "nGraph" uye iyo NLP Architect system yekugadzirisa ruzivo mumutauro wechisikigo.
Chimwe chakakosha ndeye Facebook "Detectron" (chinhu chinozivikanwa mumifananidzo), Horizon (yekusimbisa yekudzidza chikuva) uye kodhi maraibhurari ekumhanyisa michina yekufunda mashandiro.
Padivi reGoogle isu tine "BERT" yekugadzirisa ruzivo mumutauro wechisikigo uye gVisor (musanganiswa wekusanganisa nemidziyo) pamwe neCilium (network network yezvigadzirwa zvinoenderana neLinux zvichibva paBPF).
Kunyange iyeye iyo yandakabuda yakanyanya yaive iyo yakabva kuNVIDIA iyo yakaburitsa kodhi yeiyo PhysX fizikisi simulation injini uye Valve, uyo akatanga chirongwa cheProton kumhanyisa mitambo yeWindows paLinux.
Kune rimwe divi, Intel iri kuvhura yakavhurwa sosi firmware yemazwi machipisi, yakaburitsa yakavhurika firmware yehardware kutanga uye yekushandisa sosi kurodha, iri kuvandudza mutyairi mutsva wemakadhi ayo emifananidzo, uye yatanga basa rekugadzira yekuvimbika kweLinux kugovera.
Matambudziko makuru akagadzirwa muna 2018
Kana ari matambudziko akatisiyira gore rapfuura, tichisiya parutivi kukakavara pakati paRichard Stallman nechikwata chekuvandudza cheGlibc. Mumwe wevatungamiriri vanotungamira veLLVM akasiya chirongwa ichi mukusawirirana nekodhi nyowani yemaitiro.
Gore rino, kirasi nyowani yekushomeka kwehurdware nekuda kwekushandiswa kweyakagovaniswa cache paunenge uchiita yekufungidzira mirairo pane maCUU ezuva ranhasi yakaratidzwa: Kuputsika, Specter v2, Specter v3a uye v4, LazyFP, Specter v1.1 uye v1.2, SpecterRSB, NetSpectre, MeltdownPrime, SpecterPrime, SgxPectre, BranchScope, Specter-NG, Meltdown-PK, Meltdown-BR, Specter-BT -PHT, Foreshadow (L1TF) uye PortSmash.
Pakupedzisira, zvakare inoratidzira kuwanikwa kweiyo yakaipa software muUbuntu Snap Store katarogu.
Zvakare nekuonekwa kwemidziyo ine kodhi yemigodhi nemasuo ekumashure muDocker Hub. Anokuvadza mapakeji muArch Linux AUR repository.
Uye kupindira kune zvinyorwa zvekuwedzera kune iyo Kodi media centre.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zviitiko zvakakosha zvakanyanya zvakasiiwa na2018 kuvhura sosi
Iwo mutemo wanga uri mubatsiri mukuru wesoftware yemahara
Beta yechipiri yeLutris 0.5 inosvika pamwe nekubatanidzwa kweGOG uye nezvimwe